Eye Care – Page2– Healthy Life Journal
မျက်လုံးထဲ သဲဝင်သလို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်း
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သင့်မျက်လုံးက သဲဝင်သလိုမျိုး အလွန်အမင်းခြောက်သွေ့ပြီး စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်နေပါသလား။ မျက်လုံးက ချောမွေ့အောင် မျက်ရည်ထုတ်ပေးနေပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ မျက်ရည်မထွက်နိုင်လောက်အောင် ခြောက်သွေ့ပြီး ပွန်းတိုက်သလို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားနေရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်စေတဲ့ အခြေအနေတွေကတော့- ဖုန်မှုန့် ဒါမှမဟုတ် ညစ်ညမ်းတဲ့...
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်ခမ်းရောင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. မျက်ခမ်းရောင်တဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေက မျက်ခမ်းကထူပြီး ရောင်နေမယ်၊ ယားနေမယ်။ မျက်စိကနီနေမယ်။...
ခံစားနေရသည့် မျက်စိဝေဒနာများ • မက်ကူလာယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း • ဆီးချိုရောဂါကြောင့် မျက်စိအာရုံခံလွှာ ထိခိုက်ခြင်း လိုအပ်သည့် ဓာတ်များ ဗီတာမင်များ မရှိမဖြစ် ဖက်တီးအက်စစ် အမိုင်နိုအက်စစ် အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များ (၁) ဘိုင်အိုဖလေဗနွိုက် (၂) ကာရိုတီးနွိုက် (၃) အက်စ်တာဇန်သင်း၊ လူတင်၊...
မျက်စိကတစ်ဆင့် သိနိုင်သည့် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး
—–၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. မျက်မြှေးကိုကြည့်ပြီး လူတစ်ယောက်မှာ ဘယ်လိုရောဂါတွေကို သိနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. လူတစ်ယောက် သွေးအားနည်းရောဂါ ရှိ၊ မရှိဆိုတာ သိဖို့ဆိုရင် မျက်မြှေး(Conjunctiva)ကို လှန်ကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။ သွေးအားနည်းနေရင် သွေးကြောတွေမှာ သွေးစီးဆင်းမှုက...
သွေးကျဲဝေဒနာရှိသူ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူလျှင်
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကျွန်မအသက် ၇၀ ရှိပါပြီ။ သွေးကျဲဝေဒနာလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်မသိချင်တာက သွေးကျဲတဲ့ဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေမှာ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရင် အခက်အခဲရှိပါသလား ဆရာ။ Daw Mya (FB)...
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေ ကျောက်မျက်လုံးထည့်တာ သင့်တော်ပါသလား။ A. ကျောက်မျက်လုံးထည့်တယ်ဆိုတာ မျက်လုံးကို ခြစ်ထုတ်ပြီး ကြည့်လို့ကောင်းအောင် ကျောက်မျက်လုံး ထည့်လိုက်တာပါ။ အဲဒီလို ကျောက်မျက်လုံး ထည့်လိုက်ရင် မျက်လုံးကို ခြစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်...
ကလေးသူငယ်နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုတို့အား မျက်စိခွဲစိတ်ကုသခြင်း
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို မျက်စိရောဂါကြောင့် ခွဲစိတ်မှုပြုတဲ့အခါ ဘယ်လိုအချက်တွေကို သတိထားရပါသလဲ ဆရာ။ A. အသက် ၉၀ အရွယ်တွေမှာ LIG (Lens...
လူတိုင်းသိသင့်သည့် မျက်စိစောင့်ရှောက်ရေး အခြေခံအချက်များ
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ မျက်စိစောင့်ရှောက်ရေး အခြေခံအချက်အလက်တွေကို သိပါရစေဆရာ။ A. မျက်စိစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အခြေခံအချက်အနေနဲ့ စကားလုံးသုံးလုံးကို လူတိုင်းမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မျက်စိပြဿနာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ နီ၊...
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်စိအတွက် ဘယ်လိုဗီတာမင်ဓာတ်တွေက အရေးပါပါသလဲ ဆရာ။ A. မျက်စိအတွက် အဓိကလိုအပ်တာက ဗီတာမင် အေ၊ ဗီတာမင် ဒီ၊ ဗီတာမင် အီး...
အရေးကြောင်းသက်သာအောင် မျက်ဝန်းပတ်လည်မှာ ဘိုတော့စ်ထိုးတာက မျက်စိကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလား …
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. မျက်ခုံးနှစ်ခုကြား၊ မျက်ဝန်းထောင့်မှာ အရေးကြောင်းတွေရှိလို့ ဘိုတော့စ်ထိုးချင်ပါတယ်။ အဲဒါ မျက်စိထိခိုက်နိုင်ပါသလား သိချင်ပါတယ်။ NyiLatt(FB) A. ဘိုတော့စ် (Botox) ဆိုတာ Botulinum Toxin ဖြစ်ပါတယ်။...